100 Pips Amandla Trend Forex Day Ukuhweba Isu | Forex MT4 Izinkomba
Ikhaya Forex Strategies 100 Pips Amandla Trend Forex Day Ukuhweba Isu
Abathengisi abaningi abasha bavame ukuheha ethembeni lokuba ngumhwebi wosuku. Umqondo wokwenza imali ngenkathi uhleli phambi kwedeski lakho lokuhweba ungazwakala ukhanga kubo. Mhlawumbe ama-movie nezinhlelo ze-TV zenze umqondo wokuba ngumhwebi wosuku uzwakale u-sexy. Yize ukuhweba ngosuku kukude kakhulu nalokho okukhonjiswa kumamuvi, ohlotsheni olufanele lomthengisi, ukuhweba ngosuku kungaba yindlela esheshayo yokuthola imali enkulu. Akuyona indlela elula yokuthola, kepha uma uyithola kahle ungaqiniseka ukuthi ungazuza ezimakethe ze-forex usuku nosuku.
The 100 I-Pips Power Trend Forex Strategy Trading Day ingasiza abathengisi abanesifiso sokuhweba nsuku zonke. Yize ingasebenzela noma yiluphi uhlobo lomthengisi, noma ngabe i-scalper, umhwebi wosuku noma umthengisi we-swing, ingenye evumelana kakhulu nabathengisi bosuku. Izinkomba ezisetshenziswe kuleli su zisebenza kahle ekutholeni okufushane- nezinguquko mkhuba maphakathi nonyaka, enokuthambekela kokuhlala isikhathi eside ngokwengeziwe, ikakhulukazi uma iqondaniswe nenkambiso yesikhathi eside.
100 Isikhombi sePips Oracle Strength
1 100 Isikhombi sePips Oracle Strength
2 Inkomba ye-AVQ Trend
3 50 I-EMA - Isilinganiso Esishukumisayo Sokuhamba
5 Isu Lokuhweba
5.3 Indlela ukufaka 100 Pips Amandla Trend Forex Day Ukuhweba Isu?
The 100 Isikhombi sePips Oracle Strength siyinkomba yomfutho esiza abahwebi ekuboneni ukuchema kwesimo sesikhashana. Le nkomba ibonisa izinkomba zenkambiso ngokunyathelisa imigoqo ewindini elihlukile. Lawa mabha anekhodi enemibala ngokususelwa ekuqondeni komkhuba. Amabha aluhlaza akhombisa ukuthambekela kwe-bullish, amabha abomvu akhombisa ukuthambekela kwe-bearish, ngenkathi amabha aphuzi akhombisa isimo semakethe esingahambeli phambili noma esihamba kancane.
Le makethe ihamba phambili ekusizeni abathengisi ukuthi babone ukuguqulwa kwesimo sesikhashana esifushane. Ngokungafani nezinye izinkomba zomfutho, the 100 Isikhombi se-Pips Oracle Strength sivimbela abadayisi ekuthatheni amasiginali wokuhweba wekhwalithi ephansi, okwenzeka ngesikhathi semakethe eboshiwe ebangeni. Njengoba le nkomba ihlala iphuzi phakathi nezimo zemakethe ezihlukanisiwe, abadayisi kuzodingeka balinde isignali ecacile, kuboniswe ibha eluhlaza okwesibhakabhaka noma ebomvu. Le mibala ivame ukwenzeka lapho ukunyakaza kwentengo kukhombisa ukuthi kunomfutho ngemuva kwamakhandlela.
Inkomba ye-AVQ Trend
Isibonisi se-AVQ Trend siyinkomba esuselwa kumfutho esiza abathengisi ukuthi babone ukuqondiswa kwemikhuba yamaphakathi nethemu nokubuyiselwa emuva. Ibonisa ukuqondiswa kwesimo ngokugoqa imigoqo eshadini lentengo. Amabha abe esefakwa umbala ngokuya ngesiqondiso sethrendi. Amabha aluhlaza akhombisa ukuqondiswa kwethrendi ye-bullish, ngenkathi amabha abomvu akhombisa ukuqondiswa kwethrendi ye-bearish. Izimpawu zokuhweba zivame ukwenziwa noma nini lapho imigoqo ishintsha imibala.
50 I-EMA - Isilinganiso Esishukumisayo Sokuhamba
Isilinganiso Sesikhathi Sokuhambisa Esinezikhathi ezingama-50 (UMAMA) isilinganiso esihamba phambili sabadayisi abaningi, noma ngabe abathengisa noma abathengisa amabhange nabezikhungo. Kuvame ukusetshenziselwa ukukhombisa ukuthambekela kwaphakathi nonyaka. Abahwebi bebevame ukwahlulela inkombandlela yenkambiso yamaphakathi nonyaka ngokuya ngendawo yentengo maqondana ne- 50 UMAMA. Abanye abathengisi bazosebenzisa umthamo we 50 EMA ukwahlulela mkhuba isiqondiso.
Lelisu lokuhweba lamanje likhiqiza okufakiwe okususelwa ekuhlanganeni kwe 100 Isibonisi samandla wePips Oracle kanye nenkomba ye-AVQ Trend. Abathengisi bayathathwa noma nini lapho izinkomba ezimbili zikhomba kunkomba efanayo. Lezi zimpawu zokubuyiselwa emuva kwethrendi zivame ukuveza imiphumela emihle noma nini lapho amasiginali aqondaniswe ngandlela thile.
Nokho, Akufanele kuthathwe zonke izimpawu zokuhweba. Abathengisi kufanele bahlungwe ngokususelwa kusiqondisi sethrendi ye- 50 UMAMA. Lokhu kwenzelwa ukuqondanisa inkomba yethu yezohwebo nomkhuba wamaphakathi nosuku wosuku. Lokhu kwandisa amathuba okuba nokuhweba okuphumelelayo.
Lelisu futhi lisebenza kahle kakhulu lapho kuthatha ukuhweba okususelwa kukhandlela lomfutho noma ikhandlela lomfutho likhiqizwa ngaphambi kwekhandlela lokungena.
Ukwenza bushelelezi: 15
50 Exponential Moving Average (igolide)
Ubude besikhathi: esetshenziswa kangcono kushadi lemizuzu engu-5 kepha isengasebenza nezinye izikhathi ezibekiwe
lwemali Pairs: ngababili abakhulu nabancane kuphela; azikho ngababili exotic
Ukuhweba Session: okungcono isikhathi sokuhweba semali ethengiswayo (Tokyo, ILondon neNew York)
Inani okufanele abe ngaphezu 50 I-EMA ekhombisa ukuthambekela kwaphakathi nonyaka kwethemu
Amabha wesibonisi se-AVQ Trend kufanele ashintshe abe luhlaza okukhombisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bullish
Amabha wesikhombisi se-Oracle Strength kufanele aguqule abe luhlaza okwesibhakabhaka okukhombisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish ngomfutho
Faka i-oda lokuthenga ekuhlanganeni kwale mibandela
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo yenkomba ye-AVQ Trend iguquka ibe bomvu
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-Oracle Strength ishintsha ibe bomvu
Inani kufanele kube ngezansi 50 I-EMA ekhombisa ukuthambekela kwe-bearish maphakathi nethemu
Amabha wesibonisi se-AVQ Trend kufanele ashintshe abe okubomvu okukhombisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish
Amabha wesikhombisi se-Oracle Strength kufanele aguqule abomvu akhombise ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish ngomfutho
Faka i-oda lokuthengisa ekuhlanganeni kwale mibandela
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo yenkomba ye-AVQ Trend ishintshela kokuluhlaza
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-Oracle Strength ishintsha ibe luhlaza okwesibhakabhaka
Lelisu lisebenza kahle njengecebo lokuhweba losuku eshadini lemizuzu engu-5. Kulesi sikhathi esibekiwe, uzobe ubambe ukuhweba okunenzuzo cishe ihora noma ngaphezulu. Lokhu kuzovumela abahwebi ukuba bazuze kahle ngokwanele ngale kwesithiyo sezindleko zokuhweba, lapho abathengisi abaningi bakuthola kunzima ukunqoba.
Thengisa leli qhinga ngesimo semakethe esibonisa izimpawu ezinhle zokuthrenda maphakathi nethemu bese uvumelanisa ukuhweba kwakho nalolo mkhuba. Ama-spikes emakethe nawo ajwayelekile ezikhathini ezisezingeni eliphansi ngakho-ke ukuhambisa ukulahleka kokuma kuphule lapho kungenzeka khona kungumbono omuhle. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ube nezinga elihle lokuwina.
100 IPips Power Trend Forex Day Trading Strategy iyinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) futhi ithempulethi.
100 IPips Power Trend Forex Day Trading Strategy inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene kanye namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka 100 Pips Amandla Trend Forex Day Ukuhweba Isu?
Thwebula 100 Amaqhinga wePips Power Trend Forex Day Trading Trading.zip
Iya kwesokudla ukukhetha 100 Pips Amandla Trend Forex Day Ukuhweba Isu
Uzobona 100 I-Pips Power Trend Forex Strategy Trading Day iyatholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleSR Rate Alert MT5 Indicator
Isiqephu esilandelayoSR Rate HTF MT5 Indicator
Forex MT5 Izinkomba4022
Amakomidi e-Forex - November 29, 2020 0